एकल जातीय सोचले निर्मित संविधान
लालबाबु राउत काठमाडाैं, ६ असाेज
आज मैले हेरेका, बुझेका र संविधान निर्माण गर्ने बेलाका कुराहरू बाँड्न चाहन्छु । कसरी यो संविधान बनेको थियो ? कसरी यसको कार्यान्वयन हुँदैछ ? मेरा अनुभवका आधारमा संविधानमाथि केही धारणा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
आज हामी संविधान हाम्रो अनुकूल नरहेको भन्दै आएका छौं । यसो त संविधानको अन्तिम ड्राफ्ट नआउँदै हामीले दोस्रो संविधानसभा छोडेका थियौं । केही कुरामा असहमति त्यतिबेलैदेखि थियो हाम्रो । तर, आज फेरि त्यही संविधानको जगमा टेकेर म मुख्य मन्त्री भएको छु । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । अनि अहिले आइरहेका जटिलताहरू म आफैंले अनुभव गरिरहेको छु ।
वास्तवमा भन्ने हो भने यो संविधानमा रहेका राम्रा पक्ष र चुनौतीलाई हामीले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । दोस्रो संविधानसभाको मस्यौदा समितिभित्र म पनि थिएँ । संविधान निर्माणका आधारहरू जेजे भए पनि हामी राम्रो संविधान बनाउने पक्षमा थियौं । त्यतिबेला कृष्ण सिटौला समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेकपा, एमाले, माओवादी र कांग्रेस पनि थिए । मैले के बुझें भने, मस्यौदा समितिमा पहिलाको संविधानसभामा सम्झौता भएका कुरा नै बढी आए ।
मस्यौदा समितिमा संविधान निर्माणमा विविध आधार हुँदै थियो । त्योमध्ये एकल जातीय सोचबाट हावी भएको आधार मैले मुख्य पाएँ । र, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो । किनभने त्यसमा त्यति ठूलो जनयुद्ध लडेर आएका साथीहरू थिए । परिवर्तन चाहनेहरू थिए तर उहाँहरूको सोच पनि फरक पाइएन । उहाँहरूमा पनि केन्द्रीयताको साँघुरो सोच नै पाइयो । तर, मैले बुझेको संविधान भनेको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो ।
दोस्रो संविधानसभामा मस्यौदा समितिको भूमिका मैले मुख्य पाएँ । अनि १६ बुँदे सहमतिपछि त यस्तो लाग्यो कि हामी भनेको त त्यहाँ बस्दा पनि ठीक, नबस्दा पनि ठीक । अर्थात् हाम्रो कुराको सुनुवाइ त्यहाँ भएन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन लडेका सबै शक्तिहरू त्यहाँ थिए । तर, उहाँहरूको प्रस्तुति हेर्दा उहाँहरू यो मुलुकलाई निकास दिन खोजिरहेका छैनन् भन्ने लाग्थ्यो ।
नेपालको इतिहासमा यो (संविधान निर्माण) ऐतिहासिक क्षण थियो । ५०औं वर्षदेखि जनताको चाहना यही थियो कि जनताकै मतबाट चुनिएको सभाले संविधान निर्माण गर्ने । राम्रो संविधान बनाउने चाहना थियो जनताको । त्यो बेला पसिचानवादी शक्ति पनि आए । त्यसैमा संघीयता चाहिन्छ भन्ने शक्ति पनि आए । तर, हाम्रो कुरा सुन्नै नचाहने मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए । हाम्रो कुरा राख्दा हामीले बेकारमा राखेको जस्तो सोच्थे उनीहरू । विशेष महत्त्व बोक्ने हाम्रा कुराहरूलाई पनि वास्तै गरिएन ।
१६ बुँदे सहमतिपछि झनै नमज्जा भयो । फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारको शक्तिसहित कांग्रेस, माओवादी र एमाले भएपछि त हाम्रो कुरा कसले सुन्ने ? शक्तिको दमन सधैं हुने रहेछ भन्ने अनुभव मलाई त्यतिबेला भयो ।
त्यो बेला संविधान निर्माण गर्ने पृष्ठभूमि नै मिलेको थिएन । त्यस्ता धेरै घटनाको मलाई स्मरण छ । यसैले यो संविधान बडो जादुजस्तो देखिन्छ । धर्म निरपेक्षले हेरे पनि आफ्नो लाग्ने । एकदम क्रान्तिकारीले हेरे पनि आफ्नो भविष्य देख्ने । सबैले आआफ्नो स्वार्थ भेट्ने । यस्ता पनि अवधारणा छन् जसले जसरी पढ्दा पनि आफ्नो ठाउँ भेट्ने ।
यसैले त यो एकल जातीय सोचले बनाएको संंविधान भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । खस आर्य भनेको बाहुन क्षत्री भनेर बुझ्ने अनि मधेसीमा कोको जाति छन् ? जनजातिभित्र केकति जातजाति छन् बुझ्न नचाहने ? आफ्नै दृष्टिबाट मात्र सबै ठीक देख्ने प्रवृत्ति थियो ।
यसैले यो स्पष्ट देखिन्छ यो संविधान जसले उसको स्वाद संविधानमा हालिएको छ ।
मलाई आफ्ना कुरा भन्नमा केही हिचकिचाहट छैनन् । भारतीय संविधानमा निर्माणका क्रममा अम्बेडेकरले भनेका थिए– संविधान बनाउने मान्छेकै हातमा राम्रो र नराम्रो बनाउने जिम्मा हुन्छ । उसको मन–मनस्थिति संविधानमा हाबी भइहाल्छ ।
‘यो ढुंगामा कोरिएको दस्तावेज होइन । यो धर्मग्रन्थ होइन’ भन्ने गरिन्छ । तर भनेअनुसार व्यवहार गरिएको छैन । यसैले अहिले पनि हाम्रो गुनासो छ । जनसंख्याको आधारमा नेतृत्व छान्ने कुरा, राष्ट्रिय सभा गठनका कुरामा चित्त बुझेको छैन ।
अहिले पनि तपाईं हेर्नुुस् । तराई मधेसमा यसप्रति ठूलो गुनासो छ । असन्तुष्टि छ । चार दिनमा संविधान पास गरियो । कमसेकम धारा उपधारामा मतदान होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । त्यतिबेला सभामुखले पनि हतारहतार निर्णय गरेर अघि बढ्नुभो । बडो हास्यापद किसिमले बनाइयो हाम्रो संविधान ।
यसो त राम्रा कुरा पनि छन् हाम्रो संविधानमा । संघीयता मधेस आन्दोलनको जगले ल्यायो । धर्म निरपेक्षता संविधानबाटै पारित भयो । जनताको अधिकतम हकहितका कुरा आए । आधारभूत आवश्यकताका आधारमा त यो विश्वकै राम्रो संविधान हो भनिएकै छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि संविधानमा दिइएको अधिकारको प्रशंसा गरेका छन् । अन्यथा बोल्दैनौं हामी । उत्कृष्ट छ यो संविधान ।
तर जुन किसिमका अड्को थाप्ने काम ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । त्यो देख्दा प्रश्न उठ्छ, हामी केके प्रदेशको अधिकार हो ? केके केन्द्रको हो किन छुट्याउन सक्दैनौं । अधिकार सीधै माथिबाट तल आउने बनाइयो । बीचको स्थानलाई बेवास्ता गरियो । अर्थात् हिजोकै केन्द्रीयताको मनस्थितिलाई पक्षपोषण गरियो ।
को मुख्य मन्त्री असफल हुन चाहन्छ ? को मुख्य मन्त्री कामविहीन भएर बस्न चाहन्छ ?
यहाँ चार/चार महिनामा सचिव फेरिन्छ ? कसरी काम गर्ने ? उनीहरू केन्द्रीय सत्ताकै मनस्थिति हेरेर काम गर्छन् । सिधै माथि मात्र हेर्छन् । को–कोप्रति उत्तरदायी हुने, कसैले महसुस गरेको छैन । आआफ्नै मनले चलेर कसरी संघीयता टिक्छ ?
अहिले यस्ता दर्जनौं विधेयक आएका छन्, जसले प्रदेशको अधिकारलाई कसरी अंकुश लगाउने भन्ने काम गर्छ । आखिर मुलुकमा संघीयता आएपछि कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ । मत्स्यकेन्द्र संघभित्रै राख्ने ? बागमती, नारायणी सिँचाइ केन्द्रमै राख्ने । प्रहरी उसैले खटाउने ? यसैले मनगढन्ते किसिमले कार्यान्वयन गर्ने काम भएको छ ।
संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरामा सबै आआफ्नो ठाउँबाट इमानदार हुनुपर्छ । केन्द्रका मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री सबैले आआफ्नो ठाउँमा इमानदार बन्नुपर्छ । मुख्य मन्त्री पनि इमानदार बन्नुपर्छ । आखिर कुनै एक व्यक्तिले मुलुक बनाउने पेवा त पाएको होइन नि ?
धेरै पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ । धेरैको चित्त दुखेको छ । यसर्थ तब मात्र संविधान राम्रो हुन्छ, तब यसको कार्यान्वयन स्थायी रूपमा हुन्छ । तब मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ । हामी समृद्ध हुन्छौं ।
(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सन्दर्भ : संविधानका चार वर्ष, स्वीकार्यताको प्रश्न र कार्यान्वयनका जटिलता’ विषयक गोष्ठीमा मुख्य मन्त्री राउतले प्रस्तुत गर्नुभएको सम्भाषणबाट साभार ।)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ७, २०७६, ०४:५९:००